လူတိုင်းမသိကြသေးတဲ့ iPhone Calculator ကိုအသုံးပြုနည်း5နည်း -
7 months ago Myo Myint
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ .. ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ လူတွေသိပ်မသိကြသေးတဲ့ iPhone Calculator ရဲ့ tips & tricks5ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. တချို့လူတွေလဲ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ .. ဒီ Article ကတော့ မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် .. စလိုက်ရအောင်
1. မှားရိုက်မိတဲ့ ဂဏန်းတွေကိုဖျက်ခြင်း
ဟုတ်ပါတယ် .. ကျွန်တော်လဲ iPhone စသုံးခါစက အတော်လေးတိုင်ပတ်ခဲ့တာပါ .. iPhone Calculator မှာ မှားရိုက်မိတဲ့ ဂဏန်းတွေကို ဖျက်လို့ရမယ့် Delete Key ထည့်သွင်းမပေးထားပါဘူး .. Delete key အစား ဂဏန်းတွေပေါ်မှာ ဘယ်ဖက်ကိုဖြစ်ဖြစ် ညာဖက်ကိုဖြစ်ဖြစ် ပွတ်ဆွဲလိုက်ရင် ဂဏန်းတွေပျက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် .. စာနဲ့ပြောတာမရှင်းရင် အောက်ပုံကိုကြည့်ပါ .. မြှားပြထားတဲ့ နေရာကို ဘယ်ဖြစ်ဖြစ် ညာဖြစ်ဖြစ် Swipe လုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
2. Calculator ထဲမှာ ဂဏန်းတွေကို Copy/Paste လုပ်နည်း
သင့်အနေနဲ့ Calculator ထဲမှာတွက်ချက်ပြီးလို့ ထွက်လာတဲ့ ဂဏန်းတွေကို တခြားတနေရာမှာ ရေးချင်ရင် Copy လုပ်လို့ရပါတယ် .. Copy လုပ်ဖို့အတွက် ဂဏန်းတွေကို အကြာကြီး ဖိထားပေးပါ .. ပြီးရင် Copy ဆိုတာပေါ်လာပါပြီ
3. နောက်ဆုံးတွက်ချက်ခဲ့တဲ့ ဂဏန်းတွေကို Control Centre ကနေ Copy လုပ်နည်း
သင့်အနေနဲ့ သင်နောက်ဆုံးတွက်ခဲ့တဲ့ result ကို calculator app ထဲဝင််စရာမလိုပဲ Copy လုပ်လို့ရပါတယ် .. ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် Settings > Control Centre > Cutomise Control မှာ Calculator ကို ပေါင်းထည့်ပေးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်
ပြီးတာနဲ့ Control Centre ကိုဆွဲချပြီး Calculator icon လေးကို ဖိထားလိုက်ပါ .. ဒါဆို Copy Last Result ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီး နောက်ဆုံးတွက်ချက်ခဲ့တဲ့ ဂဏန်းကို Copy လုပ်လို့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်
4. ရိုးရိုး Calculator ကနေ Scientific Calculator ကို ပြောင်းနည်း
အရင်ဆုံး Control Centre က Lock ပုံလေးကို ပိတ်ပေးထားရပါမယ် .. ဒါမှ Rotate လုပ်လို့ရမှာပါ .. ဒါပြီးရင်တော့ Calculator app ထဲဝင်ပြီး ဖုန်းကို ၉၀ ဒီဂရီလှည့်လိုက်ပါ .. ဒါဆို function ပိုစုံတဲ့ Scientific Calculator ကို အသုံးပြုလို့ရပါပြီ .. မရှင်းရင် အောက်ကပုံတွေမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
5. Calculator App ထဲမဝင်ပဲ ဂဏန်းတွက်ကြမယ်
iPhone ရဲ့ Spotlight Search ကို Calculator အနေနဲ့ အသုံးပြုလို့ရပါတယ် .. ဂဏန်းသေးသေးလေးတွေတွက်ရင် Calculator app ထဲဝင်စရာမလိုတော့ အလုပ်ရှုပ်သက်သာတာပေါ့
အရင်ဆုံး iPhone Home Screen မှာ လက်တချောင်းကိုအသုံးပြုပြီး Screen အပေါ်ကနေ အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါ .. ဒါဆို Spotlight Search ပေါ်လာပါပြီ .. ဒီနေရာမှာတင် ကိုယ်တွက်လိုတဲ့ ဂဏန်းတွေကို ပေါင်းနှုတ်မြှောက်စားလုပ်လို့ရပါပြီ
ချွင်းချက်။ ။အမြှောက်အတွက် “x” သင်္ကေတအပြင် “*” ကိုပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် .. အစားအတွက်ကတော့ “/” ကိုပဲ အသုံးပြုရမှာပါ
Previous မိမိတို့ iPhone Calendar မှာဖြစ်ပေါ်နေတယ့် Spam Virus ကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ
Next မထိခိုက်စေပဲ iPhone ရဲ့ Speakers တွေကို Clean လုပ်နည်း